Mashizha ekushongedza esimbi simbi vagadziri - China Yakashongedza isina simbi machira fekitori, Vatengesi
Giredhi: 304 304L 304DQ 316 316L 201 202
Ukobvu: 0.3mm - 8.0mm
Upamhi: 100mm - 2000mm
Kureba: 500mm - 6000mm
Nhovo uremu: 25MT
Pedza: 2B, 2D
Iyo nyowani nyowani yemavara simbi isina simbi jira inogadzirwa nemakemikari kurapwa pane isina simbi pamusoro. Iwo makuru zvigadzirwa ndeemavara esimbi simbi jira bhodhi uye isina simbi yekushongedza sheet Yakagadzirwa simbi isina simbi inoita yehunyanzvi uye yehunyanzvi kugadzirisa pane isina simbi sheet, ichiita kuti ive isina simbi yekushongedza pepa ine akasiyana mavara pamusoro.
Stainless Simbi Sheets inogadzirwa muhuwandu hwakawanda hwehuwandu mamakisi anoenderana nekushandisa kwechigadzirwa. Iko Hombe stock inowanikwa yemakero akasiyana esimbi. 1.4031 / 1.4037 (304 / 304L) ndiwo anowanikwa zvakanyanya uye anonyanya kushandiswa giredhi resimbi yemapepa esimbi isina tsvina. Stainless Simbi Sheets akagadzirwawo mune akasiyana maficha nekuda kwenhamba yavo yakakura yekushandisa sarudzo. Mimwe yekupera yakajairika inozivikanwa mumusika ndeye 2B, # 3 polish masimbi esimbi, # 4 yakabwinyiswa machira esimbi uye # 8 Mirror Kupedza. Kupedzisa kunonyanya kushandiswa kwemashizha esimbi isina simbi ndiyo # 4.
Stainless simbi etching ndiro iri mune isina simbi pamusoro penzvimbo yemakemikari, ngura kubva kune akasiyana mapatani.Ne 8K girazi ndiro, wiredrawing ndiro, sandblasting ndiro seye repasi ndiro, mushure mekurapwa, pamusoro pechinhu chekuenderera kugadzira, isina simbi etching ndiro inogona kuita yemuno uye zviyo, kudhirowa, kwakapinda mukati goridhe, yemuno titanium yegoridhe uye kumwe kugadziriswa kwekugadzirisa, simbi isina simbi etching ndiro kuti uwane iwo mwenje mwenje uye rakasviba uye rine mavara.